Su'aalaha la Weydiiyo - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Alaabtayada waxaa soosaara oo iibiya warshada lafteeda. Ku soo dhowow warshaddeenna booqasho.
Sidee tahay shirkaddaada iyo xoogga warshaddu?
Waxaan nahay hogaamiyaha warshadaha xayndaabka PVC ee Shiinaha, waxaan ku siin karnaa alaab tayo sare leh qiimaha ugu tartamaya. Wada-hawlgalayaashayada waxay ku yaalliin adduunka oo idil, suuqyadeena ugu waaweyn waa Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Kanada, Yurub, Australia, Koonfur-bari Aasiya, Yurub, iyo Koonfur Afrika.
Ma bixin kartaa shaybaar?
Waxaan kuu soo bandhigi karnaa qaybo yar yar oo muunado jajab ah si aad tijaabada u sameyso. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso khidmadda dirista. Waxaan sidoo kale bixin karnaa tiro muunado ah. Qiimaha muunadaha ayaa la soo celin doonaa ka dib markaad amarka bixiso.
T / T, VISA, MasterCard, elektaroonigga ee L / C, DIA, D / P, Lacagaha Western Union. Waxaan sidoo kale ku qori karnaa warqad amarka caymiska Alibaba, waxaad toos ugu bixin kartaa Alibaba.